【 သရျောစာ 】 အတိုကျအခံ ဗွိ | Opinion Leaders
【 သရျောစာ 】 အတိုကျအခံ ဗွိ
တျောလှနျသော ဗွိ ပွနျလာပွီ။
ဘာကို တျောလှနျမှာတုနျး ဆိုတော့ကာ...အိမျး..ဒီခတျေဒီခါ တျောလှနျစရာဘာမြားရှိသတုံး။ရဲဘျောမမေေ အစိုးရကိုပဲပေါ့။
ဘယျပုံဘယျနညျး တျောလှနျမညျနညျးဆို။အို.. ကှနျမွူနဈအကွမျးနညျးက ခတျေကုနျပွီပဲ။ဒီမိုကရစေီနညျးကကြ အတိုကျအခံလုပျပွီး တျောလှနျမှာပေါ့။အစိုးရကောငျးတို့မညျသညျ အတိုကျအခံကောငျးရှိရစမွဲတဲ့။ဒီတော့ အစိုးရကောငျးဖို့အရေး အတိုကျအခံကောငျး‌တှလေိုပွီ မဟုတျပလေားဗြာ။ခုဆို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကလညျး ခေါဘဏီ‌သော ပုလိပျတပျကွီး ဝိုငျးခံရတဲ့ နှဈရာကွေးဖဲဝိုငျးလေးလို မကျြနှာမှဲ မွနျမာပွညျကို ဝိုငျးထားလရေဲ့။ဥက်ကာပြံကွီးကလညျး လာနပွေီဆိုလား။ဒီလို ကမ်ဘာ့ကပျဆိုးကွီးတှကွေား ဗိုငျးရပျဈမရှိသေးတဲ့ မွနျမာပွညျလေး ဗိုငျးရပျဈအလှနျကာလမှာ လကျမထောငျနိုငျအောငျအလိုငှာ့ မောငျဗွိ တဈယောကျ အတိုကျအခံလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခွငျးရယျပါ။
ဟုတျပွီ။အတိုကျအခံလုပျတာတော့ ဟုတျပါပွီ။အတိုကျအခံဆိုတာ ဘုံဆိုငျမှာ သူမြားဒကာခံသမြှ အရကျလိုကျသောကျတဲ့ ကုနျးဆငျးအတိုကျခံလို အလှယျလေးမဟုတျဘူး။အတိုကျအခံဆိုတာ နောကျခံနိုငျငံရေးအငျအားစုရှိမှဖွဈတာ။ဘယျမလဲ။နငျ့အတိုကျအခံအငျအားစု။ကြောငျးသင်ျကွနျမှာ ကပွီးခုနျပွီးမှ ကိုရိုနာကို အရေးပျေါကွောကျလာလို့ စာမေးပှဲတှေ စတော့ခိုငျးတဲ့ ကြောငျးသားတှလေား။ဒါမှမဟုတျ ရုပျရှငျရုံတှေ ပိတျလိုကျရလို့ မကနြေပျကွတဲ့ ရုပျရှငျခဈြသူတှလေား။ဘုရားပှဲတှေ ပါမဈပိတျတော့ အမြိုးဘာသာသာသနာပကျြပွီ အျောနတေဲ့ ဖုနျရှုဖငျနှိုကျ ပှဲကွိုကျမောငျတှလေား။နို့ ဘယျသူတှကေို နငျစညျးရုံးမှာလဲဆို။
မောငျဗွိဟာ ဒီလောကျညံ့လိမျ့မလားဗြာ။နိုငျငံရေးမှာ ဘယျလူတနျးစားကို အခွခေံမယျဆိုတဲ့ ကိုယျ့ဘကျဂ‌ရောငျးကာလာကို အခြိနျမတနျပဲ ထုတျမရှိုးရဘူးတဲ့ဗြ။နိုငျငံရေးဆိုတာ ပါးပါးလေး။အထူးသဖွငျ့ အတိုကျအခံနိုငျငံရေးဆိုတာ ပိုဖွငျ့ခကျသေးတယျ။မောငျဗွိရဲ့ ပုလငျးခှကျလှညျ့ ဘကွီးမူးမွငျ့အောငျ က တခါပွောဖူးတယျ။အခုဆို အရငျအတိုကျအခံဘ၀က လာတဲ့သူတှေ အစိုးရဖွဈတော့ အစိုးရဖွဈရတာ မလှယျဘူးဆိုတာ သိသှားတယျ။အစိုးရဘ၀က ဈာနျလြှောသှားတဲ့သူတှကေလညျး အတိုကျအခံဖွဈတော့ အတိုကျအခံဖွဈရတာ မလှယျဘူးဆိုတာ သိသှားတယျတဲ့။
ပွညျသူတှကေလညျး ဘယျသူဘာဖွဈဖွဈ ငါတို့လညျး မလှယျဘူးဆိုတာ သိသှားတယျတဲ့။အခုအရှယျမှ ကညျြပှအေ့တကျပေါကျ (အငျး. သူ့ပုံက. ကညျြ့ပှလေ့ောကျတော့ ရှိဟနျမတူဘူးဗြ) ဝါးတူ‌လောကျဆိုတော့ ဝါးတူအတကျပေါကျပွီး ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၊ မွနျမာစာကြောငျးသားလုပျနတေဲ့ ဘကွီးမူးမွငျ့အောငျ ပွောတာနျော။ကြှနျတျော မောငျဗွိ အာဘျောမဟုတျပါ။
အိမျး..ပွနျဆကျကွဦးမဗြာ။ဒီလိုမလှယျတဲ့ နိုငျငံတျောကွီးရဲ့ မလှယျတဲ့ နိုငျငံရေးကွီးမှာ ဗွိဟာ အတိုကျအခံအငျအားစုကို ဦးဆောငျတော့မှာဆိုတော့ ဒီကောငျမလှယျတဲ့ကောငျပါလားလို့သာ မှတျကွဗြာ။ဘယျပုံဘယျနညျးမြား အတိုကျအခံလုပျမလဲ။မတျတပျရပျ၊ ထိုငျထတှပေဲ လကေ့ငျြ့နမေလား။မိုကျပေးပါ မိုကျပေးပါ အစခြီတဲ့ ရတုလင်ျကာတှပေဲ ရှတျနမေလား။အဲ့ဒါတှေ တဈခုမှမလုပျဘူး။သူတို့ထကျ မွငျ့တဲ့သူတှေ၊ နညျးပညာတှနေဲ့ပဲ မောငျဗွိဟာ မွနျမာ့အတိုကျအခံအငျအားစုကို ဦးဆောငျမှာ။အဲ့ဒီလို ကွှေးကွျောသံပွီးသကာလ မောငျဗွိတဈယောကျ ပထမဆုံး ကနျတျောလေးဘကျက ဘုနျးကွီးကြောငျးတဈခုမှာ ဒုလ်လဘသှားစညျးလိုကျတယျ။
ဘုနျးကွီးကြောငျးဆိုတဲ့အတိုငျး လာရောကျခိုကပျနတေဲ့ ဒုက်ခသညျ သုနက်ခောအုပျစုက အမြားကွီး။ဘဘုနျးတို့ ဆှမျးကနျြ၊ ဟငျးကနျြတှကေို မှီခိုနတေဲ့ အောငျနကျ၊ ဂုတျကြား၊ မွီးတို၊ ဖွူမ၊ ရမျဘို၊ ထိပျကှကျ၊ မှေးကွဲတို့တတှနေဲ့ မောငျဗွိ အဖှဲ့ကနြတေယျတဲ့။တခါတခါ ‌ဒီခှေးအုပျကွီးနဲ့ စကားတှပွေောလိုကျ၊ နိုငျငံရေးတရားတှဟေောလိုကျ လုပျနတေော့ ကြောငျးကကိုယျတျောတှကေတောငျ ဒုလဘ်လဘမောငျဗွိ ကို ကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့ဖွဈလာတယျ။ဒီဒုလဘ်ဘကိုယျတျောဟာ မာဂဓစကားပဲ တတျတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ ရူးမြားနလေားဆိုပွီး ကြောငျးကနှငျထုတျခငျြလာကွပရေဲ့။
တကယျက မောငျဗွိဟာ မာဂဓစကား တတျတာမဟုတျဘူး။သူက အောငျနကျတို့ဂရုကို လူစကားသငျပေးနတောတဲ့လေ။
အလိုလေး။အတိုကျအခံအငျအားစုကို ခေါငျးဆောငျမယျ‌ ကွှေးကွျောပွီး ဘုနျးကွီးပွေးဝတျတယျ။အခုကြ ကြောငျးနားက ခှေးတှကေို လူစကားသငျပေးနပွေနျသတဲ့။မောငျဗွိတဈကောငျတော့ ဝူဟနျကွောကျလို့ ဂေါကျသှားရှာပွီလို့ လူတှထေငျကုနျကွတယျ။ဘယျသူတှေ ဘာပွောပွော ခုဆို အောငျနကျတို့အုပျစုဟာ ဆရာမောငျဗွိ အသငျအပွကောငျးလို့ အရငျလို အာဝု အာဝု ဝုတျ ဝုတျကနေ လူလို တဈလုံးစ နှဈလုံးစ ပီလာပါပွီ။ဟော့ သုံးလုံးစ လေးလုံးစ ပီလာပါပွီ။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာတျောဆီက လူထှကျခှငျ့လြှောကျပွီး လူထှကျတဲ့နမှေ့ာတော့ အတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျလောငျး ဗွိဟာ အောငျနကျတို့တသိုကျခွံရံပွီး ရပျကှကျထဲ ပွနျဝငျလာပါတော့တယျ။
"ငါသညျကား အတိုကျအခံ အစဈဧကနျ ဖွဈခပြွေီ..ငါ့တှငျ နောကျလိုကျနောကျပါ အတိုကျအခံအငျအားစု ရှိပပွေီ" မောငျဗွိဟာ လကျထဲကအမဲရိုးကိုမွှောကျပွီး ထိုနှယျကွှေးကွျောလိုကျခြိနျမှာတော့... အတိုကျအခံ ဆရာကွီးဗွိရဲ့ နောကျလိုကျ အောငျနကျတို့ အုပျစုဟာ ဆရာကွီးဗွိ သငျပေးထားတဲ့ လေးလုံးသော လူစကားကို ပီပီသသကွီး အူလိုကျပါတော့တယျ။
တော်လှန်သော ဗြိ ပြန်လာပြီ။
ဘာကို တော်လှန်မှာတုန်း ဆိုတော့ကာ...အိမ်း..ဒီခေတ်ဒီခါ တော်လှန်စရာဘာများရှိသတုံး။ရဲဘော်မေမေ အစိုးရကိုပဲပေါ့။
ဘယ်ပုံဘယ်နည်း တော်လှန်မည်နည်းဆို။အို.. ကွန်မြူနစ်အကြမ်းနည်းက ခေတ်ကုန်ပြီပဲ။ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး တော်လှန်မှာပေါ့။အစိုးရကောင်းတို့မည်သည် အတိုက်အခံကောင်းရှိရစမြဲတဲ့။ဒီတော့ အစိုးရကောင်းဖို့အရေး အတိုက်အခံကောင်း‌တွေလိုပြီ မဟုတ်ပေလားဗျာ။ခုဆို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း ခေါဘဏီ‌သော ပုလိပ်တပ်ကြီး ဝိုင်းခံရတဲ့ နှစ်ရာကြေးဖဲဝိုင်းလေးလို မျက်နှာမွဲ မြန်မာပြည်ကို ဝိုင်းထားလေရဲ့။ဥက္ကာပျံကြီးကလည်း လာနေပြီဆိုလား။ဒီလို ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုးကြီးတွေကြား ဗိုင်းရပ်စ်မရှိသေးတဲ့ မြန်မာပြည်လေး ဗိုင်းရပ်စ်အလွန်ကာလမှာ လက်မထောင်နိုင်အောင်အလိုငှာ့ မောင်ဗြိ တစ်ယောက် အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်းရယ်ပါ။
ဟုတ်ပြီ။အတိုက်အခံလုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။အတိုက်အခံဆိုတာ ဘုံဆိုင်မှာ သူများဒကာခံသမျှ အရက်လိုက်သောက်တဲ့ ကုန်းဆင်းအတိုက်ခံလို အလွယ်လေးမဟုတ်ဘူး။အတိုက်အခံဆိုတာ နောက်ခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုရှိမှဖြစ်တာ။ဘယ်မလဲ။နင့်အတိုက်အခံအင်အားစု။ကျောင်းသင်္ကြန်မှာ ကပြီးခုန်ပြီးမှ ကိုရိုနာကို အရေးပေါ်ကြောက်လာလို့ စာမေးပွဲတွေ စတော့ခိုင်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေလား။ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ပိတ်လိုက်ရလို့ မကျေနပ်ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေလား။ဘုရားပွဲတွေ ပါမစ်ပိတ်တော့ အမျိုးဘာသာသာသနာပျက်ပြီ အော်နေတဲ့ ဖုန်ရှုဖင်နှိုက် ပွဲကြိုက်မောင်တွေလား။နို့ ဘယ်သူတွေကို နင်စည်းရုံးမှာလဲဆို။
မောင်ဗြိဟာ ဒီလောက်ညံ့လိမ့်မလားဗျာ။နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်လူတန်းစားကို အခြေခံမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘက်ဂ‌ရောင်းကာလာကို အချိန်မတန်ပဲ ထုတ်မရှိုးရဘူးတဲ့ဗျ။နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါးပါးလေး။အထူးသဖြင့် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးဆိုတာ ပိုဖြင့်ခက်သေးတယ်။မောင်ဗြိရဲ့ ပုလင်းခွက်လှည့် ဘကြီးမူးမြင့်အောင် က တခါပြောဖူးတယ်။အခုဆို အရင်အတိုက်အခံဘ၀က လာတဲ့သူတွေ အစိုးရဖြစ်တော့ အစိုးရဖြစ်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတယ်။အစိုးရဘ၀က ဈာန်လျှောသွားတဲ့သူတွေကလည်း အတိုက်အခံဖြစ်တော့ အတိုက်အခံဖြစ်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတယ်တဲ့။
ပြည်သူတွေကလည်း ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတို့လည်း မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတယ်တဲ့။အခုအရွယ်မှ ကျည်ပွေ့အတက်ပေါက် (အင်း. သူ့ပုံက. ကျည့်ပွေ့လောက်တော့ ရှိဟန်မတူဘူးဗျ) ဝါးတူ‌လောက်ဆိုတော့ ဝါးတူအတက်ပေါက်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာကျောင်းသားလုပ်နေတဲ့ ဘကြီးမူးမြင့်အောင် ပြောတာနော်။ကျွန်တော် မောင်ဗြိ အာဘော်မဟုတ်ပါ။
အိမ်း..ပြန်ဆက်ကြဦးမဗျာ။ဒီလိုမလွယ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံရေးကြီးမှာ ဗြိဟာ အတိုက်အခံအင်အားစုကို ဦးဆောင်တော့မှာဆိုတော့ ဒီကောင်မလွယ်တဲ့ကောင်ပါလားလို့သာ မှတ်ကြဗျာ။ဘယ်ပုံဘယ်နည်းများ အတိုက်အခံလုပ်မလဲ။မတ်တပ်ရပ်၊ ထိုင်ထတွေပဲ လေ့ကျင့်နေမလား။မိုက်ပေးပါ မိုက်ပေးပါ အစချီတဲ့ ရတုလင်္ကာတွေပဲ ရွတ်နေမလား။အဲ့ဒါတွေ တစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။သူတို့ထက် မြင့်တဲ့သူတွေ၊ နည်းပညာတွေနဲ့ပဲ မောင်ဗြိဟာ မြန်မာ့အတိုက်အခံအင်အားစုကို ဦးဆောင်မှာ။အဲ့ဒီလို ကြွေးကြော်သံပြီးသကာလ မောင်ဗြိတစ်ယောက် ပထမဆုံး ကန်တော်လေးဘက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာ ဒုလ္လဘသွားစည်းလိုက်တယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း လာရောက်ခိုကပ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည် သုနက္ခောအုပ်စုက အများကြီး။ဘဘုန်းတို့ ဆွမ်းကျန်၊ ဟင်းကျန်တွေကို မှီခိုနေတဲ့ အောင်နက်၊ ဂုတ်ကျား၊ မြီးတို၊ ဖြူမ၊ ရမ်ဘို၊ ထိပ်ကွက်၊ မွှေးကြဲတို့တတွေနဲ့ မောင်ဗြိ အဖွဲ့ကျနေတယ်တဲ့။တခါတခါ ‌ဒီခွေးအုပ်ကြီးနဲ့ စကားတွေပြောလိုက်၊ နိုင်ငံရေးတရားတွေဟောလိုက် လုပ်နေတော့ ကျောင်းကကိုယ်တော်တွေကတောင် ဒုလဘ္လဘမောင်ဗြိ ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်ဖြစ်လာတယ်။ဒီဒုလဘ္ဘကိုယ်တော်ဟာ မာဂဓစကားပဲ တတ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရူးများနေလားဆိုပြီး ကျောင်းကနှင်ထုတ်ချင်လာကြပေရဲ့။
တကယ်က မောင်ဗြိဟာ မာဂဓစကား တတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူက အောင်နက်တို့ဂရုကို လူစကားသင်ပေးနေတာတဲ့လေ။
အလိုလေး။အတိုက်အခံအင်အားစုကို ခေါင်းဆောင်မယ်‌ ကြွေးကြော်ပြီး ဘုန်းကြီးပြေးဝတ်တယ်။အခုကျ ကျောင်းနားက ခွေးတွေကို လူစကားသင်ပေးနေပြန်သတဲ့။မောင်ဗြိတစ်ကောင်တော့ ဝူဟန်ကြောက်လို့ ဂေါက်သွားရှာပြီလို့ လူတွေထင်ကုန်ကြတယ်။ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ခုဆို အောင်နက်တို့အုပ်စုဟာ ဆရာမောင်ဗြိ အသင်အပြကောင်းလို့ အရင်လို အာဝု အာဝု ဝုတ် ဝုတ်ကနေ လူလို တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ ပီလာပါပြီ။ဟော့ သုံးလုံးစ လေးလုံးစ ပီလာပါပြီ။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာတော်ဆီက လူထွက်ခွင့်လျှောက်ပြီး လူထွက်တဲ့နေ့မှာတော့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်လောင်း ဗြိဟာ အောင်နက်တို့တသိုက်ခြံရံပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်လာပါတော့တယ်။
"ငါသည်ကား အတိုက်အခံ အစစ်ဧကန် ဖြစ်ချေပြီ..ငါ့တွင် နောက်လိုက်နောက်ပါ အတိုက်အခံအင်အားစု ရှိပေပြီ" မောင်ဗြိဟာ လက်ထဲကအမဲရိုးကိုမြှောက်ပြီး ထိုနှယ်ကြွေးကြော်လိုက်ချိန်မှာတော့... အတိုက်အခံ ဆရာကြီးဗြိရဲ့ နောက်လိုက် အောင်နက်တို့ အုပ်စုဟာ ဆရာကြီးဗြိ သင်ပေးထားတဲ့ လေးလုံးသော လူစကားကို ပီပီသသကြီး အူလိုက်ပါတော့တယ်။